How'd it happen and more reports?: စင်ကာပူတွင် အိမ်ဝယ် ဘယ်လိုဝယ်မလဲ?
စကာင်္ပူမှာ အိမ်ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ မသိသေးသူတွေအတွက် ကိုအေးငြိမ်း ဘလော့ မှာကူးယူဖော်ပြလိုက်တာပါ....
သို့သော် တစ်ဦးဦးသေဆုံးခဲ့မည် ဆိုပါက သေဆုံးသူ၏ ဆန္ဒအတိုင်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ပေးခွင့်ရှိသည်။ သေဆုံးသူက မည်သည့်ဆန္ဒမျှ မထားရစ်ခဲ့ပါကIntestate Succession Act ဥပဒေအတိုင်း ရပိုင်ခွင့်ကို ခွဲဝေမည်။
(က) အကယ်၍ ရောင်းမည့်သူသည် ပွဲစား (Agent) မသုံးဘဲ မိမိကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် ဆိုပါက Resale Checklist for Sellers who do not engage Salespersonကို နားလည်အောင် ဖတ်ရှုကာ လိုအပ်သည်များကို ကြိုတင် ပြလုပ်ထားရမည်။ ဘာလုပ်ရမည်ဆိုသည်ကို Resale Checklist for Sellers ထဲတွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။ အောက်ဖြော်ပပါ
(ဂ) အိမ်ရောင်းဝယ်နေစဉ် first appointment ၌ ရောင်းမည့်သူသည် ထို Resale Checklist မူရင်း နှင့် နောက်အိမ်ဝယ်ရန် တွက်ချက်ထားသော Financial planတို့ကို Repository သို့ Option to Purchase နှင့်အတူ တွဲတင်ရပါမည်။
ရောင်းသူအနေနှင့် ၀ယ်သူအား နှစ်ဦးသဘောတူထားသော ဈေးနှုံးဖြင့် ၀ယ်ယူရန် ရွေးချယ်ခွင့်ကို ပေးနိုင်သည်။ သို့သော် ဤသို့ပေးခြင်းမှာ Resale Checklistလုပ်ပြီး ၇ ရက်နောက်ပိုင်းမှ ဖြစ်၏။
Exercise လုပ်သည်ဆိုခြင်းမှာ စရံငွေ အပြည့်ပေးခြင်းကို ခေါ်ပါသည်။ အသင်သည် ဤအိမ်ကို ၀ယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီ ဆိုသည်နှင့် Option Period အတွင်းexercise လုပ်ရပါသည်။ ဤသို့လုပ်ရာတွင် -
ရောင်းသူ၊ ၀ယ်သူနှစ်ဦးလုံးသည် အိမ်ဝယ်လျှောက်လွှာ (resale application) အား HDB သို့ မည်သည့်နေ့၌ တင်မည်ကို ဆုံးဖြတ်ရပါမည်။ ၀ယ်သူက exerciseလုပ်အပြီး ဘယ်နှရက်အကြာတွင် တင်မလဲ ဆိုတာ ဖြစ်ပါသည်။
ထို Legal Fees မှာ အိမ်ဝယ်ခြင်းအတွက် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးသော ရှေ့နေခ ဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အိမ်တန်ဘိုး၏ ၀.၄ ရာခိုင်နှုံး သို့မဟုတ် အများဆုံးS$ 2500 ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အိမ်တန်ဘိုး အနည်းအများပေါ်လိုက်၍ ပြောင်းနိုင် ပါသည်။ ဥပမာ ဦးဘ သည် ဦးမြ ထံမှ ထောင့်ဆုံးရှိ Terrace အိမ်တစ်လုံးကို စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၂သိန်း ၈ သောင်း ဖြင့် ၀ယ်ယူလိုက်သည် ဆိုပါစို့။ ဦးဘ ပေးဆောင်ရမည့် ရှေ့နေခမှာ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၁၂၀ ဖြစ်ပါသည်။
ဤနေရာတွင် ငွေချေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အကျဉ်းရုံးပြီး သိသင့်သလောက်သာ ဖော်ပြထားပါသည်။ အမှန်တကယ်တွင် ငွေ အမြောက်အများချေးခြင်းအတွက်Terms and Conditions များမှာ အလွန်ရှုပ်ထွေးပါသည်။
ဘဏ်တိုးနှုံးများကို Fixed Rate, Variable Rate / Floating Rate, Combination of Fixed and Variable Rate ဟု သုံးမျိုး ခွဲနိုင်ပါသည်။ Fixed Rate ဟူသည်မှာ မိမိ ငွေချေးထားသမျှ ကာလပတ်လုံး အတိုးနှုံးမပြောင်းလဲဘဲ ပုံသေ အတိုးနှုံးသာ ယူ ခြင်းကို ခေါ်ပါသည်။ Variable Rate / Floating Rate ဟူသည်မှာ ပြောင်းလဲနေသော ဘဏ်တိုးနှုံး ဖြစ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် CPF Board မှ ချပေးသော အတိုးနှုံး အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ Combination of Fixed and Variable Rateဟူသည်မှာ ငွေချေးသော အစပိုင်း နှစ်များတွင် ပုံသေ အတိုးနှုံးယူပြီး အချိန်ကာလ တစ်ခုတွင် အတိုးကို ပြောင်းယူခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ထိုမျှသာမက ဘဏ်တစ်ခုထဲမှာပင် အတိုးများသော package မှ အတိုးနည်းသော အခြားတစ်ခုသို့ ပြောင်းတာမျိုးလည်း ရှိပါသည်။ ၎င်းကို repricingဟုခေါ်ပါသည်။ ထိုမျှသာမက ဘဏ်တစ်ခုမှ အခြား ပိုပြီး မက်လုံးကောင်းသော ဘဏ်တစ်ခုသို့ လည်း ပြောင်းနိုင်ပါသေးသည်။ ၎င်းကို refinancing ဟု ခေါ်ပြီး ဤကဲ့သို့ပြောင်းခြင်းအတွက် စာချုပ်အသစ်ထပ်ချုပ် ရသဖြင့် ရှေ့နေခ ထပ်မံပေးရပါလိမ့်မည်။
ထို့အတူ2Year Fixed Rate Package သည် ငွေချေးယူသည့်နှစ်မှ စကာ ပထမ ၂ နှစ်အတွင်း ပုံသေ အတိုးနှုံး၊3Year Fixed Rate Packageငွေချေးယူသည့်နှစ်မှ စကာ ပထမ ၃ နှစ်အတွင်း ပုံသေ အတိုးနှုံး စသဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။
အိမ်ငှားလိုလျှင် သော်ည်းကောင်း၊ အိမ်အရောင်းအ၀ယ် ပြုလုပ်လိုလျှင်သော် လည်းကောင်း အိမ်ပွဲစားများဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် လိုင်စင်ရ ပွဲစားများ(SAEA-Singapore Accredited Estate Agencies) ဖြစ်ပါ၏။ အိမ်အရောင်းအ၀ယ်၊ အိမ်ငှား ကြော်ငြာများ ကို ရှာဖွေလိုလျှင် The Straits Times သတင်းစာ၊Classified ကဏ္ဍ မှ Properties တွင် ရှာနိုင်ပါသည်။